World News – Page 2 – Harodigeed
Mad-habta Kaatoligga & Soomaaliya, Maxay tahay Halista ka imaan karta Kaniisada laga furay…
Waddanka bariga Afrika ee xadka la leh Itoobiya iyo Kiiniya, dadkiisa waxa la gu qiyaasaa 11 milyan, kuwaas oo boqolkiiba 98.8 ay muslin yihiin. Kiniisaddii Kaatoliga ahayd ee Muqdisho la ga dhisay 1928kii, wax ay ahayd ta u gu weyn…
Wasiirka arimaha Dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa la kulmay dhigiisa dalka india,kadib markii uu gaaray dhawaan halkaas. Labada Masuul ayaa ka wada hadlaya sidii Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran dalkaas India dib loogu…
XASAASI: Madaxweynaha Uganda oo Kiis loo heysto Somalia darteed
Xisbiga Mucaaradka Dowladda Uganda ayaa ku heysta madaxweynaha dalkaasi Kiis ku aadan inuu ka biyo diidayo in Ciidamada Uganda ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM laga soo saaro Dalka Soomaaliya. Hogaamiyaha Mucaraadka, Mugisha Muntu ayaa…
XIISADA KHALIIJKA: Fadeexad kale oo ku soo baxday Imaaraadka Carabta
Iyadoo ay bishii labaad gashay xiisadda diblomaasiyadeed ee ka tagaan Khaliijka ayaa fadeexad kale ay ku soo baxday dalka Imaaraadka Carabta. Sida ay qortay Majallada NEWSWEEK Imaaraadka ayaa olole u galay in safaaradda Daalibaan ku…
Beelaha Biyo Maal Iyo Habargidir Oo Ku Dagaallamay Marko Iyo Warar Sheegaya…
xalay ahaa ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabellaha Hoose. Maleeshiyaad kasoo kala jeeda Labo bee loo dega magaaladaasi, marar badanna halkaa isku qabtay ayaa xalay ku dagaallay sida la sheegay xaafadda Buulo Jaan ee Marka.…
DEG DEG: Dagaal xooggan oo ka socda duleedka magaalada Kismaayo
Wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka socdo dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada Jubbaland iyo kuwa Al-shabaab. Al-shabaab ayaa la sheegay in weerar lama…
DEG DEG: Dibadbax Ka Dhan Ah Farmaajo Iyo Kheyre oo ka socda Muqdisho
Waxaa hadda dibadbax ballaaraan kana ah Madaxweyne Farmaaajo iyo Ra’iisul wasaare Kheyre ka soconayaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada Makka Al-mukarrama. Dibadbaxayaashan ayaa xiray inta u dhaxeysa Isgoysyada Zoobe iyo Banaadir,…
XOG: Xildhibaannada Damuljadiid Iyo Kuwa Aala-Sheekh Oo u Heshiiyey Dowladda Federaalka
Xog hoose oo ay shegay wakaaladda wararka ee Warqaad.com ayaa waxay sheegeysaa in Muqdisho ay heshiis ku gaareen Xildhibaannada Damuljadiid iyo sidoo kale kuwa Aala-Sheekh, kaasi oo ka dhan ah dowladda Federaalka. Xildhibaannada Labadan…
DEG DEG: Dagaal xooggan oo hadda ka socda Shabellaha Hoose
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in Dagaal Xoog leh oo u dhexeeya Ciidamada Dowladda iyo Al-shabaab uu hadda ka soconayo Tuulada lagu Magacaabo Majabto oo hoostagta Degaanka Janaale ee Gobolka Shabellaha Hoose.…
Waxaa goordhow Qarax xoogan uu ka dhacay Isgoyska Ex-Kontarool Balcad ee degmada Heliwaa Gobolka Banaadir. Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Qaraxaasi uu ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso. Waxaa ku dhaawacmay 2 qof oo la socday Gaari…